2007-09-06 @ 07:22 in Andavanandro
Mahery mihitsy isika Malagasy amin’ny fomba fitadiavam-bola. Hay hatrany ny manararaotra amina toe-javatra iray. Ataoko fa endrika iray itarafana ny fahaiza-mivarotra izy io raha tsy fahaiza-manambaka.
Mitohy hatrany ny resaka fiofanan’ny sefom-pokontany. Tany amin’ny andiany voalohany dia henjana tokoa ny fanaraha-maso ireo sefom-pokotany ireo na dia tany amin’ny sekoly fatoriana aza. Nambenana miaramila mitam-basy mihitsy ny vavahadin’ny sekoly. Raha misy izany olona hafa te-hiditra dia tsy mahazo miditra. Ireo izay te-hivoaka ny sekoly hamangy havana kosa dia atsasak’adiny ihany no fetra azo ivoahana.
Voarara ny matory any amin’ny havana na dia manana havana na olom-pantatra eto an-drenivohitra aza. Nivaha tsikelikely ihany izany fifehezana izany taty aoriana. Efa mahazo mivoaboaka ihany ireo sefom-pokontany ireo amin’izao fotoana izao. Hazakazaka ny an’ny mpivarotra madinidinika manemitra ny vavahadin’ny sekoly, indrindra rehefa tonga ny hariva. Hita avokoa ny karazan-javatra rehetra any amin’ny antsoina hoe tsena fa ny tena betsaka dia ny fivarotana lamba tonta ( friperia) ihany. Ireny manko no tena be mora vidy, amin’ny ankapobeny dia Ar2000 eo avokoa na Ar1000 ny ankamaroan’ny fitafiana. Tonga eny ihany koa ny mpivarotra kojakojan-tokantrano na zavatra hafa madinidinika. Io karazan-tsena io amin’izao fotoana izao aloha no tsy raofin’ny polisin’ny fivondronana.
Henjana dia henjana manko ny fanadiovana ataon’io sampan-draharaha io na dia efa tonga aza ny ora tokony iravany. Fantatry ny mpivarotra amoron-dalana izany ka izay no mahafeno vetivety ny lalana rehefa migadona ny amin’ny dimy ora sy sasany eo ho eo. Izao kosa dia mivezivezy mihitsy ny fiaran’ny fivondronana ka lasa toy ny hafahafa indray ilay hoe malalaka ny lalana odiana. Raha mba fantatr’izy ireo manko fa hotontosaina eto Antananarivo amin’ity volana ity ny fivorian’ny Ben’ny tanàna ao amin’ny fikambanana « métropolis » ka izay no mampihenjana ireto mpiasan’ny fivondronana ireto. Mety halalaka ihany re io rehefa vita ny fivoriana e.